Guddoomiyaha gobolka oo xariga ka jaray Saldhiga Boliiska ee Shibis”SAWIRO” – Radio Muqdisho
Gudomiyaha gobalka Banaadir ahna duqa maqaalada Muqdisho Xasan Maxamed Xuseen (Mungaab) oo ay Wehliyaan Mas’uuliyiin ka tirsan Maamullka gobalka Banaadir kan degmada Shibis ayaa maanta xariga ka jirey dhismaha Saldhiga Booliska degmada Shibis oo mar dhow dactir lagu sameyay dhismaha Saldhigaas.
Sidoo kale Guddoomiyaha gobalka Banaadir ayaa isla maanta dhagaxdhigey Xaruna degmada Shibis oo dib u dhis lagu sameynaayo kadib markii guddoomiyuhu uu howlo kormeeer ah ku tagey degmadaasi oo sidoo kale ay ka socodaan mashaariic horumarineed.
Guddoomiayaha degmada Shibis ee gobalka Banaadir Cabdi Fitaax Nuur Cali oo la hadlay saxaafadda ayaa sheegay in degmada Shibis ay hadda ka socdaan mashaariic kala duwan oo dib loogu dhisaayo xarumaha muhiimka ah oo ku yaala degmadaasi.
Janaraal Maxamed Cumar Madaale Taliyaha qeyba Guud e Booliska gobalka Banaadir oo isna Munasabada Ka hadley ayaa maaamulka gobalka Banaadir ugu Mahadcaliyay dactirka ay ku sameyaan Saldhiga Booliska degmada Shibis.
Gudomiyaha Gobalka Banaadir ahna duqa maqaalada Muqdsiho Xasan Maxmed Xuseen (Muungaab) oo ugu dambeyntii goobada Ka hadley ayaa sheegay in dhismaha Saldhiga Booliska ee laga hergaliyay degmada Shibis lagu dhisey Mashruuca loogu magac daray “dalkaaga dhiso” kaas oo maamulka gobolka Banaadir ay ugu golleeyihiin in ay dib u dhis lagu sameeyo xarumaha muhiimka ah ee gobolka Banaadir.